सफलता पाउन मुकेश अम्बानीसँग सिक्नैपर्ने कुराहरु | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeजेठ १, २०७६ chat_bubble_outline0
सफलता सबै मानिसहरुको भाग्यमा लेखिएको हुँदैन । संसारमा धेरै मानिसहरुले कोशिश गरिरहेका हुन्छन् तर थोरैले मात्र सफलता प्राप्त गर्ने गर्छन् । सफलता हासिल गर्ने त्यस्तै थोरै मानिसहरुमध्येका एक भाग्यमानी हुन् मुकेश अम्बानी । एशियाकै ५ सबैभन्दा धनीमा गनिने मुकेश अम्बानीको सफलताको रहस्यहरुबारे केही चर्चा गरौं ।
राम्रो टीमको चुनाव
एउटा राम्रो टीमबिना केही पनि गर्न सकिन्न । राम्रो क्षमता भएका टीम बनाउने र सहकार्यका साथ मेहनतपूर्वक काममा जुट्नु सफलता प्राप्तिको लागि अति जरुरी हुन्छ । यो कुरा मुकेश अम्बानीले राम्ररी आत्मसात गरेका छन् ।
सधैं सकारात्मक रहनु
उठ्दा, बस्दा, हाँस्दा, खेल्दा, पढ्दा वा काम गर्दा सधैं सकारात्मक रहनु जरुरी हुन्छ । दृष्टिकोण राखेर काम गरियो भने सफलता प्राप्त गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । जीवनमा जतिसुकै नकारातमक मानिसहरु आफू वरिपरि झुम्मिउन्, तपाईं सकारात्मक रहनु भयो भने तपाईंलाई कसैले पछि पार्न सकदैन । यो कुरा मुकेश अम्बानीले राम्ररी बुझेका छन् र जीवनमा लागू गर्ने कोशिश गरेका छन् ।
असफलताबाट पाठ सिक्नु
असफलताबाट नडराउनु, त्यसबाट सिक्नु र कहिले पनि हार नमान्नु ः यो नै सफलताको एउटा मुख्य कुँजी हो । मुकेशले यो कुँजीलाई राम्ररी पक्रेका छन् ।
के गर्ने भन्ने थाहा हुनु
एउटा सफल उद्यमीलाई के गर्ने भनेर थाहा हुनु जरुरी हुन्छ । सफल हुनको लागि सबैभन्दा ठूलो मूल मनत्र नै कुनै पनि काम शुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईंलाई आफूले के गर्दैछु र आफ्नो लक्ष्य के हो भनेर थाहा पाउनु जरुरी हूनछ । बिना लक्ष्य यताउता भड्कँदैमा केही हासिल हुने वाला छैन । मुकेशले यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा राम्ररी लागू गरेका छन् ।
सपना र सोचाइ ठूलो राख्नु
ठूलो सपना देख्नका लागि मुकेशले आफ्ना पिता धीरुभाई अम्बानीबाट सिकेका थिए । मात्र ५०० रुपियाँको फोन शुरु गरेर अम्बानी परिवारले हर व्यक्तिको हातमा मोबाइल थमाइदिए । मुकेको यो सोचले उनलाई अरु भीडबाट अलग गरिदियो । जीवनमा कुनै पनि ठूलो गर्नको लागि हरेक व्यक्तिले सबैभनदा पहिले आफ्नो सोचको दायर ठूलो राख्नुपर्छ ।
नडराउनुहोस्, हिम्मतले काम लिनुहोस्
मुकेश अमबानीले सानै उमेरमा आफ्नो पिताको व्यवसायसँग जोडिएका थिए । तर व्यवसायको सानामसिना कुराहलाई मिहिनसँग सिक्न पाउनुभन्दा पहिल्यै उनको काका रसिकभार्य र पिता धीरुभाई अम्बानीको मृत्यु भयो । तर मुकेश अम्बानीले आफ्नो धैर्य नगुमाइकन पिताको व्यवसाय सम्हाले । उसले आफ्ना पिताको व्यवसायलाई सम्हाल्ने काम मात्रै गरेनन्, त्यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाए पनि । मुकेशले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि नडराइकन, हिम्मतका साथ काम गरेकै कारणले उनले आफ्नो व्यवसायको अकूत साम्राज्य खडा गर्न र फैलाउन सकेका हुन् ।
लकडाउनमा मैले त्यो गरेँ, जुन कहिल्यै गरिनँ
भीषण कार दुर्घटनापछि यी व्यक्तिले पाए नयाँ अनुहार र दुई हात
पाँच तारे होटलमा जस्तै सेवा र सुविधा भएको जेल, जहाँ शानले बस्छन् कैदी
यी व्यक्तिबाट सिक्नुहोस् पैसा बचाउने र सम्पत्ति जोड्ने तरिका
विदेशबाट पैसामात्र होइन, सीप पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् यी युवा
कुनै हालतमा अनलाइन परीक्षा गरिँदैन : मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
रातोपाटी ब्रिफिङ : मुख्यमन्त्रीमाथि सांसद अपहरणको आरोप, ओलीको नीति उल्टाउँदै देउवा
सरकार र उखु किसानबीचको छलफल विना निष्कर्ष टुंगियो
माओवादी छाडेका जनप्रतिनिधिलाई प्रचण्डको भ्याकेटबारे जानकारी दिन सर्वोच्चको आदेश
किन भएन मन्त्रिपरिषद विस्तार ? सरकारको चाबी माधव नेपालको खल्तीमा !
जाजरकोटमा युवा कुट्ने वडाअध्यक्षको पक्षमा आन्दोलन